Kulan diirada lagu saaray waxay ay tabeyso Mqudisho oo Muqdisho lagu qabtay
Kulan ballaaran oo ay ka qeyb galeen Marwada Ra’iisul Wasaaraha Drs. Hodan Saciid Ciise, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka, Ururada Haweenka degmooyinka Gobolka Banaadir, Fanaaniin ay ka mid ahaayeen Seynab Xaaji Cali Baxsan, Binti Cumar Gacal iyo haween ka socday 16-ka degmo ee Gobolka Banaadir ayaa maanta ka dhacay Hotelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho,
Kulankan oo halku dhigiisa ahaa “Muqdisho Maxay dooneysaa, Dalka iyo dadka maxay doonayaan”, waxaana intii uu socday Kulanka lagu soo bandhigay Suugaan ka hadlaysay Muhiimada Muqdisho ay leedahay iyo dalka waxaa uu doonayo.
Hey’adda Wada hadalka bulshada oo kulankan soo qaban qaabisay ayaa muhiimad gaar ah siisay dadka waxay doonayaan, dalka wuxuu doonayo iyo Kaalinta Haweenka ka qaadan karaan horumarinta bulshada, Midnimada iyo ammaanka.
Ugu horeyn waxaa kulanka furay Gudoomiyaha Hey’adda Wada hadalka bulshada ee CCD Ciise Axmed Cumar oo sheegay in Muqdisho ay dooneyso nabad, dalkana u baahan yahay hogaan cadaalad ah oo ka samata bixiya dhibaatooyinka heysta shacabka.
“Muqdisho waxay dooneysa nabad, dalku wuxuu doonayaa hogaan cadaalad ah, dadka waxay doonayaan Midnimo”ayuu yiri Gudoomiyaha Hey’adda Wada hadalka Bulshada Ciise Axmed Cumar oo u mahadceliyay Fanaaniinta Kooxda Qeyla Dhaan iyo ka qeyb galayaasha kulankan.
Marwada Ra’iisul Wasaaraha Marwo Drs. Hodan Saciid Ciise oo iyana ka hadashay kulanka ayaa uga mahadcelisay Hey’adda Wada hadalka bulshada kulamada ay bulshada u qabato, iyadoo tilmaamtay in wada hadalka bulshada uu qeyb ka yahay dib u heshiisiinta.
“Aan wada hadalno waa aan wada heshiino, waa la socdaa Hey’addan kaalinta bulshada ay ugu jirto, inay wada hadalsiiso, oo guryaha ka soo saarto, waa u mahadcelineynaa”ayay tiri Marwada Ra’iisul Wasaaraha Drs. Hodan Saciid Ciise.
“Muqdisho waxay u baahan tahay nabad, waxay u baahan tahay, bilic, ardayda waxay u baahan yihiin in Iskuulada aadaan, bulshada waxay doonayaan dib u heshiisiin, Muqdisho waa caasimadii dalka”ayay tiri Marwo Drs Hodan Saciid Ciise.
Intii Kulankan socday ayaa hees ka hadlaysay Muqdisho Maxay dooneysay waxaa ku luuqeeyay Fanaaniinta Jooqle Shire Jaamac, C/xakiin Farayare, Sahra Ileeye iyo Fanaanada Surqa, kuwaasoo suugaantooda xambaarsaneyd dareenka dadka iyo dalka, waxaana aad uga maqsuudeen ka qeyb galayaasha, waxaana heestan ahaa mid muujineysay Muqdisho waxay dooneyso, dalka iyo dadka waxay doonayaan ayaa waxaa soo saaristeeda lahaa Hey’adda wada hadalka bulshada ee CCD.
Gudoomiyaha Haweenka Hey’adda CCD Sahra Maxamed Amiin ayaa iyana sheegtay in kaalinta haweenka ay udub dhexaad u tahay nabadgelyada, waxaana ay ugu baaqday in Muqdisho u baahan yahay Dastuur dalka oo dhan lagu dhaqo, maqaamkii ay laheydna lagu cadeeyo.
Qaar ka mid ah Gudoomiyeyaasha Ururada haweenka degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa soo dhoweeyay midnimada haweenka iyo in muhiim tahay in Caasimada Muqdisho la xaq dhowro, iyagoo ku ammaanay Hey’adda CCD kulamada, siminaarada iyo doodaha ay bulshada u qabaneyso.
Gudoomiye kuxigeenka Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyed Canab Xasan Cilmi ayaa sheegtay in Muqdisho ay nabad u baahan tahay, dadka degan ay ku naaloodaan walaalnimo, nabadgelyo iyo is dhex gal, waxaana ay ku ammaantay Hey’adda CCD isu keenka bulshada oo ay tibaaxday in dal iyo dibad ay isugu keentay.